Nicholas key: "Hanaanka federaalka maahan mid loogu tala galay mid dalka lagu kala qeybiyo, waxaa loogu talo galay in dalka lagu mideeyo oo lagu xoojiyo dalka". | Markacadey.com
Jun 29, 2014	markacadey	-
Nicholas key: “Hanaanka federaalka maahan mid loogu tala galay mid dalka lagu kala qeybiyo”.
Ergayga gaarka ah ee QM ee Somalia Nicholas Key ayaa ugu baaqay hoggaamiyaasha soomaalida in ay ka faa’ideystaan hannaanka federaalka ee ka dhaqan gelay Soomalia. Mr Kay oo waraysi gar ah siiyey BBC-da ayaa waxa uu tilmaamay in habka federaalka laga dhaqangeliyey waddamo badan oo horumaray, Soomaaliya na ay hormar ka gaari karto haddii si wanaagsan looga faa’ideysto.
“Hanaanka federaalka maahan mid loogu tala galay mid dalka lagu kala qeybiyo, waxaa loogu talo galay in dalka lagu mideeyo oo lagu xoojiyo dalka, tusaale ahaan wadamada qaatay federaalka waa wadamada mideysan oo horumarsan sida jarmalka, kanada iyo mareykanka, maahan wadamadaan kuwo qeybsamay.” ayuu yiri Mr Kay
Hadalka MrKay ayaa kusoo aadaayo xilli Nabad diide xaad uu kasoo horjeestay Hanaanka federaalka oo ay sooomalida isku raacsan tahay beesha caalamkana ay garwadeen ka tahay. Hadalka Mr kay ayaa ah miiddgniin u ah beelaha dhulboobka yo nabad la’aanta ay caado u noqotay.
Halkan ka dhegeyso wareysiga gaarka ah ee uu mr kay ay layeelatay BBC-da.